Ngaba ungandibonisa iindlela ezilungileyo zokufumana i-backlink entsha kwi-SEO?
Akukho mfuneko yokuthi isakhiwo soqhagamshelwano sesandula kubaluleke nakakhulu kwi-Injini yokuSebenza ngokuSebenza (SEO) kunanini ngaphambili. Yingakho ukufumana i-backlinks entsha - ngokwemvelo nangokwemvelo - YIMANZI kuyo yonke i-webmaster kunye nomnini wesayithi ofuna ukuqhuba inkqubela enkulu kwi-SEO, kunye neeprojekthi zabo ze-intanethi ezibonwe phakathi kweziphumo zophando eziphezulu. Masijamelane nayo - ukufumana i-backlink ezintsha ezisebenzela ukuphuculwa kwe-intanethi engcono ayikho nje ngokuthembela kwabo okanye ukuthandwa kwabo. Ndiyathetha ukuba isakhiwo soqhagamshelwano lwendalo sithetha ngokubaluleka kwangempela ngewebhusayithi yakho okanye iblogi - ekugqibeleni, ukukhokela kwiincutshe ze-niche kwaye wenze iprojekthi yakho ibelwe ukwabelana, ukukhankanya nokuxhuma kunye. Ngoko, akukho mfuneko nje yokukhawuleza ukuzama ukufumana ubuninzi be-backlinks ezintsha. Kuya kuba ngcono kakhulu ukubeka ugxininiso kumgangatho wabo kunye nohlobo lwezinto eziphilayo-okokuqala nokuphambili. Ukwenza njalo, makhe ndikubonise iindlela ezithile zokusebenzisa iindlela zokufunda iindlela ezintsha zokubuya kwendalo ngokwemveliso yakho.
Isiqulatho esiyingqungquthela esilungiselela ixabiso elongezelelweyo
Ngaphambi kwayo nayiphi na enye into, yonke iwebhusayithi okanye iblogi kufuneka ibe nomxholo oqinileyo wephepha ohambisa inani elikhulu kubaphulaphuli abanomdla abasebenzisi okanye i-target niche yabathengi abanokulindeleke ukuba baguqulwe babe ngabathengi bamene. Ngale ndlela, ngokukodwa amaphepha akho ewebhu angabonwa yiGoogle njengento ekhethwayo ngokubhekiselele kwi-intanethi ngokubanzi, kunokuba nayiphi na iwebhsayithi okanye iiblogi ezihambelana nengxoxo yesifundo okanye enye ishishini shishini. Ingakumbi - ukufumana i-backlink entsha kunye nomxholo oyingqayizivele kunye nobunjani obuphezulu kuthetha ukuba uya kuxhamla kubangelwa kwiikhonkco ezingqinelanayo, ezibizwa ngokuba zinamandla kunazo zonke kwi-White Hat Hat.
UkuQinisekiswa kokuQinisekisa nokuBoniswa
Cinga ngokuphinda uhlalutye inxalenye yeembhalo zakho zetekisi (okanye ubuncinci bezinto ezimbi kakhulu) kwiindlela ezithile ezikhangelekileyo kunye neyona ndlela ekhangayo. Ndiyathetha apha ukuba uyacetyiswa ukuba utyalomle ixesha lakho ekudaleni iifom ezithandwayo ezisemgangathweni ezinokulindeleke ngokufanelekileyo ukuba zikulethe i-traffic enkulu enkulu, kwaye ukhangele i-backlinks ngexesha elifanayo-phantse ngendlela eqhutywa. Ngaloo ndlela, ubhetele ukugxila ekudaleni ngokubonakalayo okubonakalayo okubonakalayo, ama-spreadsheets, imifanekiso kunye nexabiso elongezelelweyo eliza kuhlala likukhawuleza emva kwexesha elide.
Ibhulogi yeendwendwe ezakha iGunya lakho
Ukufikelela kwiiblogi ezidumile kwi-niche yakho okanye abachaphazeli abaphezulu abachaphazelekayo kwishishini lakho. kungekuphela nje ukufumana i-backlink esitsha kunye ne-PageRank enamandla kakhulu, kodwa ukwakha igunya lakho kunye nokholo phakathi kwabasebenzisi. Ekugqibeleni - ukuba ube ngumthombo okhokelayo wolwazi kwintsimi, ngoko ke uthatha ukhokelo kwaye wenze iwebhusayithi yakho okanye iblogi ibonakale kukhuphiswano lophando. Ngexesha elifanayo, ke, ungalibali ukuba yonke ixesha uthumela isithuba somvakalisi ophezulu kwiiblogi zakwabo - ufumana i-backlinks ezifanelekileyo ukukhokela ezinye iindwendwe ezithembekileyo kumaphepha akho Source . Qinisekisa ukuba ubhala amanqaku eendwendwe ezifunwa kakuhle kunye neembalo zebloki eziphosakeleyo kuphela ngenjongo-kwaye uyenziwe!